Matte Nhema Bathroom Bhegi Yakapararira
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Matte Nhema mbiri-Handle Yakapararira Yekugezera Faucet
WOWOW Matte Dema Mbiri-Kubata Yakapararira Bathroom Faucet
Rated 4.87 Kunze kwe5 yakavakirwa 23 kasitoma ratings
(23 kasitoma wongororo)
Iyo furo inonamira yakarongedzwa matte dema, ayo anogona kuchengetedza iwo kubva kune kutu uye ngura.
Sink mvura & yekugezera pombi hosvo iri mune bundle. Iva nechokwadi chekushandisa premium simbi yekutengesa kune Yako Wellbeing
Kudzora Kwekupisa - Maviri-anobata levers yeRinyore kudzora kwetembiricha yemvura uye rwizi rwemvura zvakananga
Easy Setup - Zvese Zvikamu zvakagadzirirwa kumisikidzwa zvinosanganisirwa.
2321300B mirairo yekuisa
3 Makomba Gomo Yakapararira Yekugezera Faucet 2321300B-AMUS: chinjika chinhambwe pakati pe6 '' - 14 ''; Hole saizi: 32 - 38 mm / 1.26 - 1.5 ''
Yakasikwa Kurumidza Unganisa Technology: nyore kuisa wega pasina pombi, huya ne pop up drain musangano. Chengetedza KUPINYIRA KUPINYIRA KUTYA NEWOWOW FAUCET
Nhema 2-Handle Bath faucet: yakasarudzika matte dema pasi, yekare uye yakapusa, kuramba kutu uye kushatisa kuburikidza nekushandiswa kwemazuva ese, inokodzera imba yekurenda, kamo, imba, imba yekushambadzira, shandisirwo yekutengesa, hotera
Leak-isina Kutungamira-yemahara Basin Faucets: yakakwirira yekuisa chisimbiso NSF ceramic cartridge uye mvura-yekuchengetedza ABS aerator inova nechokwadi chekutsiva uye kutungamira, pari zvino inopa zvinyoro-nyoro, mvura yakagadzikana inoyerera inobata maviri inobata nemaoko mashoma kuedza
YEMWE HONDO HONDO neCUSTOMER SIMBU: Yakavharwa nemazuva makumi mapfumbamwe-kudzoka kwemahara uye hupenyu hwewaranti! RUDZIDZA KUSVIRA EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: 8 Inch, Nhema, dhureni
Ndakatenga mabhegi eDelta nePhisher zvisati zvave nemutengo wakakwira. Chigadzirwa cheWOWOW chakanyanya kupfuura zvandinotarisira zvemhando yepamusoro, nyore kuisa uye kukosha kwemari yangu. Inotaridza kushamisa pane yangu nyowani masinki ekugezera. Kunyangwe kurongedza kwakakwirira kirasi. Ini ndinoda mao-mhete akavakirwa-mukati pasi pemabatiro nepombi yekudzivirira kuvuza. Iyo flex yekubatanidza pombi yakauya nayo zvakare ipulagi uye inotamba isina kubvuza. Handiite ongororo yakawanda yechigadzirwa asi ndinogutsikana zvikuru nechigadzirwa ichi chandaifunga kuti ndichachigovana newe.
Ini munguva pfupi yapfuura ndakagadzirisa imba yangu yekugezera iyo yaisanganisira kutsiva bhafa rangu rekare rekugezera uye kabhineti neyakajeka asi yakati rebei pechigadziko. Izvi zvaida pombi nyowani dzakapararira.
Nekuda kwekugadzirisa, ini ndakanga ndisisina singi yekugezera yaishanda. Naizvozvo, sezvo ini ndaida mapombi matsva ipapo, ndakatsvaga zvitoro zvangu zvemuno, kusanganisira zvitoro zvakakura zvemaketani. Ndakashamisika uye ndakasuwa kuti, kwete chete ivo vaingova nesarudzo yakaganhurirwa yemapombi ekugezera akapararira, asi iwo ese anodhura padyo kana kudarika $ 100!
Ndakafunga kuti ndinogona kuenda ndisina sink yekushandira kwemazuva mashoma, uye ndainzwa chokwadi kuti ichave nesarudzo iri nani pamwe nemutengo uri nani;
Ini ndakakurumidza kuwana akawanda mapombi ekuti ndisarudze kubva ine yakaderera mutengo poindi pane yandakawana munzvimbo dzangu dzemunharaunda dzekuvandudza dzimba. Ndakagara pamusangano uyu wepombi, uye ndaisagona kufara. Mapombi ane akanaka akapetwa nickel kupera, uye zvese zvinosanganisirwa zvekumisikidzwa, kunze kwemaviri mairi anodhura mapaipi anodikanwa kuti abatanidzwe nemvura. Ndakanga ndine shamwari yaindibatsira neyekugadzirisa, uye ha akaisa mapombi. Zvisinei, ndine chokwadi chekuti ndingadai ndakazviita ini pachangu, nekuti paingova nezvikamu zvishoma zvekuungana, uye iyo mifanidzo mirawo yaive yakatwasuka-mberi uye yakapusa kunzwisisa uye kutevedzera. Ndiri kutumira mufananidzo wedhishi rangu nyowani nemapombi akaiswa uye achishanda. Ini ndinokurudzira zvikuru iyi yakapararira gungano repombi yekugezera nekugadzirwa kwayo, mhangura inoshandiswa mukugadzira kwayo, runako rwayo uye izvo zvandinofunga zvakakosha - zviri nyore kuisa.
Chimwe chiitiko cheiyi gungano repombi ndiyo "yekumira" yedhishi. Inovhara nekusundira pasi pairi, uye inovhura nekuisundira pasi pairi zvakare. Ini ndinotenda uku ndiko kusimudzira kukuru pamusoro pechinyakare chinomira, icho chaida kuti iwe ushandise lever kuvhura nekuivhara. Pamwe ini ndini ndakasarudzika, asi ini handina kumbobvira ndawana imwe yerudzi rwekare iyo yaisashanda. Muchokwadi, kazhinji yenguva, ndakazviwana ndiri kurasa zvachose. Ndiri kunyatsofara kuva, izvo zvandinofunga kuve, yakanyanya kuvandudzwa chimiso. Izvi zvingaite kunge diki uye zvisina basa kuvandudza kune vamwe, asi kune avo vedu vakabata nematambudziko ekare mhando yekumisa, chinhu chinogamuchirwa.
Hunhu hwakanaka hwemutengo! Iyo yekupedzisira inotaridzika chaizvo uye pombi inoshanda sekunge inofanirwa. Basa revatengi rakakura, iyo pop up drain haina kushandira singi yangu (ipfupi kwazvo). Ini ndakatumira tsamba kumutengesi uye mukati memaminitsi gumi vakauya nehurongwa. Vakawana pombi nyowani iyo yakareba uye inowirirana nekupedzisa / dhizaini yepombi, ndokunditumira mari kuti nditenge iyo nyowani. pombi.
Aya ndiwo mamwe emapombi akanaka andakatenga, kunyanya panguva ino yemutengo. Ivo vakanaka, vakashongedzwa uye vanongotaridzika kunakidza mune yangu nyowani yekugadzirisa yekugezera. Ini ndaishandisa yakachipa inodhura seti yekumusoro remodel uye ino inotaridzika ZVAKANAKA zviri nani. Kutendeseka, inotaridzika uye inoshanda pamwe neMoen kana Delta asi iri pamusoro pe50% zvishoma. NDINONYANYA kukurudzira ichi chigadzirwa.
Pombi iyi inoshamisa! Ndichiri kuita remodel ndakasarudza mapombi akati siyanei muCHROME yemabathrooms angu nekicheni. Kazhinji kutaura kunoti iwe unowana chaunobhadhara kunoita sekubata chokwadi asi kwete mune ino nyaya. Ndakave nazvo izvi muchimbuzi changu nekushandisa kwemazuva ese kweinopfuura mwedzi mitanhatu izvozvi uye izvi ndizvo zviripo zvigadziri zvangu zvandinoda. Ini handina kana nyaya nekudonha, kubvunda mabati, kumanikidzwa kwemvura kana chero kumwe kunyunyuta kwakajairika nemapombi. Cherry iri pamusoro neiyi faucet ndeye haina kuratidza nzvimbo dzemvura. Yangu yese mimwe mipombi inofanirwa kucheneswa mazuva ese mashoma kuti ndirambe ndichitarisa nyowani asi kwete iyi. Ini ndinogona chaizvo kuenda mavhiki maviri nehafu ndisina kuipukuta pasi kana kuikwesha uye haugone kana kutaura. Ndiri murudo nemapombi aya. Ivo vari parutivi neMutengo Wangu Pfister pombi maererano nehunhu asi ndivo chete bhegi rinoratidzika serakanaka nguva dzese.
Ini ndakatsiva yakakwira yekupedzisira yekugezera pombi neiyi. Iyo inokurumidza yekubatanidza hoses yakaita iyo yekuisa mhepo uye ini ndakanyatso kufadzwa neyakavakirwa mhando uye kuti yakawanda sei yakanaka izvi zvinotaridzika kupfuura chedu chekare. Ndakafunga kuti ndirikutora mukana pachiratidzo chandanga ndisati ndambonzwa nezvacho asi kwehafu yemutengo weizvo zvandaizobhadhara mune hombe bhokisi rezvitoro ichi chaive chinhu chakakosha kwazvo.
Ndiri mune yekurenda uye ndanga ndisingade kushandisa toni kutsiva mapombi maviri akashata muna tenzi wangu. Ini ndiri kunyanyisa kupfuura kufadzwa neizvi. Iyo mhando ndeye yepamusoro notch uye yakapusa nyore kuisa. Semazuva ese, zvinotora nguva yakareba kubvisa zvekare pane kuisa zvitsva… Kazhinji unotambura nehunhu kana iwe uchitsvaga kukosha. Nguva ichataura, asi kusvika zvino izvi zvave zvinonakidza zvemari.
Ini ndinowanzo shandisa Big Name Brand Faucets mune yedu Facility. Asi mushure mekuona wongororo ndakafunga kuyedza imwe.
Yakanyanya kufadzwa nehunhu hwepombi, uye iko nyore kwekumisikidza. Yuniti inonzwa yakasimba, uye yakavakwa zvakanaka, uye zvinongedzo zvakarukwa zvisina tsvina.
Ida pombi iyi !! Huru mhando yemutengo wakakura. Kutariswa kwaLowe uye iyo imwechete pombi yaive $ 119 yeimwe. Zvirokwazvo kurudzira!
Aifanirwa kutsvaga pombi nyowani paunenge uchiita madiki ekugezera kugadzirisa. Anoda kutaridzika kutaridzika kweiyi seti. Ndakaitenga seMATTE KABHUKU uye ndanga ndichitarisira izwi rakachenuruka zvishoma asi izvi zvakanaka kwazvo. Dzimwe dzesimbi dziri muchimbuzi dziri padyo neiyo greyish ruvara asi ini ndinogona kurarama neichi. Wedu remodeler akataura kuti kuisirwa kwaive nyore sei. Pombi yacho inoshanda sezvainofanira saka ndinofara uye mutengo wacho waive chokwadi.
Mapombi aya akagadzirwa nemunhu aiziva zvavanga vachiita. Ivo vane maoil seals kana gaskets pane rimwe gomo kudzivirira mvura kubva mukuyambuka. Iko kuisirwa kuri nyore uye nekukurumidza. Izvo zvinoshandiswa zviri zvemhando yepamusoro saka havangotarisike chete zvakanaka asi havazoite ngura.
Ini ndanga ndatenga mapombi angu apfuura kubva kuchitoro chemuno chemari nemutengo wakakwira kwazvo, asi iwo akapedza isingasviki makore matatu. Zvino pandakaenda kunodzibvisa ndakawana nzungu yacho yazara nevhavha uye ndaifanirwa kuicheka. Sezvineiwo pakanga pasina chisimbiso chakanaka chakakomberedza hwaro hwevharuvhu uye nzungu yacho yaigadzirwa nezvinhu zvakachipa zvinoita ngura. Sezvo yaive mukati mekabhineti uye yakaoma kusvika, izvi zvakatora maawa.
Ndokusaka ndakafara kwazvo pandakaona magadzirirwo akaitwa seti iyi uye nemhando yemhando yavaishandisa pakuvaka.
Bhegi iri rakakwana! Ida iyo inotaridzika, nyore kuisa, rakakura rinorema basa mhando. Hapana mafinger prints. Takashopota tichitenderera asi hatina kuda kushandisa $ 100 saka takatora mukana pazvinhu izvi uye takafara chaizvo. Hauzombo nyadziswa.
Ini ndakatsiva pombi yangu yechinyakare yechinyakare neiyi. Ndiri kufara kwazvo! Zvinotaridzika zvakanaka uye zvaive nyore kuzviisa ini !! Ini ndinoronga pakutenga mamwe maviri kutsiva mamwe mapombi ekare.
Tiri kutsiva mapombi mashanu ekugezera anodhura zvakapetwa zvakapetwa neizvi. Izvi zvinokwezva, zviri nyore kwazvo kuisa uye zvakagadzirwa chaizvo. Chinhu chega chandinofanira kutaura icho chiri mune chero chisina kunaka ndechekuti iwo mirairo inofanira kukuudza iwe kuti utenge imwe pombi tambo yekuvharisa kuti ushandise pane yekudonha pombi tambo. Pombi yedhizaina yakagadzirirwa masinki ine gomba rekufashukira saka kune maburi parutivi pazasi pekumira, pakati penzungu negasket pazasi. Shinda dzakanyatsoitika uye ini ndakazoona kuti mvura painodhonza inozobuda mumakomba akafashukira uye ichidonhedza iyo tambo uye kunze kwenzungu yakabata pombi yekudonha mukati. Yakagadziriswa zviri nyore neshinda yekuvharisa. Iwe unorairwa kushandisa plumbers putty uko iyo dhayeti inosangana nepamusoro pesingi, asi iyo haisi iyo sosi yekudonha. Tora tambo yekuvhara. IMO, haugone kukanganisa nepombi iyi pamutengo!
Kana chete kuti mitengo yaive yakadzika kwazvo kune ino yakanaka tepi, zvaive nyore kwazvo kuisa. Iyo pop up dhure yakatanhamara. Ini ndinotarisira kuti pombi iyi igare kwemakore. Pombi yakafanana neiyi kubva kudhina huru nedhaka yaizodhura zvakapetwa katatu kupfuura pombi iyi. Ini ndinokurudzira zvikuru uye ndaizotengazve.
Ini ndakatenga izvi kutsiva pombi yemakore makumi maviri nemashanu. Iyo yekumisikidza yaive mhepo kunyangwe yeayo novice DIY installer seni. Chikamu chega chakaoma kwaive kubviswa kwepombi yekare ine ngura. Izvo zvinopihwa zvirinyore zvinongedzo zvakaita kuti kuisirwa kuve kunyanya kusarwadza nyaya. Chichemo chega ndechekuti pombi inogadzirwa nehuremu huremu uchienzaniswa newepombi yekare iyo yakatsiva. Chigadzirwa chakapedzwa chinotaridzika kunge chakatsetseka uye chakanyanya kutsvinda, zvakadaro.
Yakaiswa mubhavha isingawanzo shandiswa saka usave nehupenyu hwehupenyu nayo asi pasuru yakakwana nezvose zvaunoda uye inoshanda mushe, inotaridzika zvakanaka. Chokumirisa ipush yekuvhara mudziyo pane yakajairwa tsvimbo yekusimudza uye kudzikisa chimiso. Ini handisi kudanana neizvozvo asi chokwadi chiri nyore uye chine chinomomesa mukati mawo kana ukadonhedza chimwe chinhu pasi padhivha unogona kudhonza musangano wese wekumira kunze woitora. Izvo zvimwe zvinowedzera zvekuwedzera pane zvakashata zvekushaya tsvimbo yekuvhura / kuvhara yekumisa.
Bhegi iri rinotarisa uye rinoshanda mushe yekugezera. Kuisirwa kwaive nyore nechinhu chimwe chete chekucherechedza. Iyo inokurumidza yekubatanidza hoses inouya nepombi inofanirwa kugara pasi zvine mutsindo kana yaiswa. Ini ndaifunga kuti ndanga ndavabatanidza zvakanaka asi pakavhurwa mvura uye pombi yakavhurwa, vese vakabva vadimburwa. Kugadziriswa kuri nyore, ingo rangarira kusundira zvakasimba paunenge uchibatanidza hoses.
Ini ndaive nenyaya diki neyeaerator pombi uye ndakawana iyo WOWOW vatengi seinokurumidza uye inoteerera. Yakakura kambani, inogona zvirokwazvo kukurudzira iyi pombi.
Ndichingowana izvi ndokuzviisa. Zvaive nyore kuisa, kurongedza kwakanakisa uye yakanaka kwazvo fir kukosha. Ndakaverenga akawanda eongororo ndisati ndatenga uye ndisina musoro. Parizvino hapana kuvuza uye kunoratidzika kunge kwakanaka. Kana paine chinoshanduka ini ndinonyorazve ongororo yangu. Uyezve, ndichangowana chigadzirwa ini ndakagamuchira email kubva kumutengesi. Yakati kana paine nyaya zvachose ndinofanira kuvabata ivo chaiko. Sezvandataura kusvika zvino zvakaisvonaka. Rangarira kukosha kwakanyanya kwemari.
Tinoda pombi iyi. Iyo bhatani bhatani rekudonha plug rakanyanya kunaka. Mabato anotendeuka mushe uye mvura inoyerera zvakanaka. Ndakaitenga yeyese yekugezera remodel yandaive ndichiita uye ndainetsekana nekutenga chakadai chinhu pamhepo ndisati ndanyatso chiona. Zvinopfuura zvandinotarisira. Ndatenda nechigadzirwa chikuru uye neruzivo rwakakura nekutenga uku.
Mabhomba akapedzwa zvakanaka uye akarongedzwa zvakanaka. Iyo spigot yakagadzirirwa ine yakanaka centering pamusoro peshibhodhi bhesheni. Gasketing uye fittings pasi pemapombi uye spigot inofungidzirwa zvakanaka kudzivirira kudzivirira kupinda kwemvura. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinoita kunge zvemhando yepamusoro. Iyo pop up drain uye yakasungirirwa, nepo isina kusimba seyakatsiviwa, inopfuura yakakwana. Kuiswa kwanga kusiri kwakaoma uye kwaisanganisira Hardware yaive iripo. Kupakira kwakanakisa nefaucet yega yega uye spigot imwe neimwe yakasungwa saka kukwenya mukufamba hakuna kuitika.
Chaicho chigadzirwa chakanaka chaive muImba Depot uye handina kuwana imwe yandaifarira ndikawana iyi paWOWOW ye $ 20 shoma. Kuiswa kwacho kwaive nyore chaizvo uye ini ndakaisa masinki mashoma pamusoro pemakore uye iyi ndiyo yaive iri nyore. Zvese zvinhu zvainzwa kusimba kwazvo, ini ndaifarira chaizvo iyo drain yakauya nayo iyo iri nani zvakanyanya kupfuura iyo iine yekukwevera kuseri kwepombi. Ndichatora imwe kana ini ndikagadzirisa imwe yangu yekugezera.
Takatenga izvi kutsiva pombi yangu yaivapo iyo yakanga ichidonha. Zvaive nyore kuisa. Zvakanditorera ingangoita hafu yeawa kuti ndibudise pombi yakare uye nezve maminetsi makumi maviri kuti ndiise iyi nyowani. Izvo zvinouyawo nepop up drain, iyo yandinodawo zvakanyanya. Vanotaridzika vakakura. Handina chokwadi chekuti vachagara kwenguva yakareba sei, asi ndinofara nekutenga kwezvino.
WOWOW Centerset Bathroom faucet Ine Drain Asse ...